फोहरबाट हुने स्वास्थ्य समस्या — Vikaspedia
फोहरबाट हुने स्वास्थ्य समस्या
स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहरबाट हुने स्वास्थ्य समस्या
साङ्गुलाई मृत्यु किन भयो ?
के केले गर्दा साङ्गुलाई मृत्युबाट बचाउन सकिन्थ्यो ?
स्वास्थ्यकर्मीले मानिसलाई स्वस्थ राख्न हरदम प्रयास गर्दछ । तर स्वास्थ्यजन्य फोहरमैलाको उचित तरीकाले व्यवस्था नभएको खण्डमा यसले स्वास्थ्यकर्मी एवं समुदायमा धेरै थरीका रोगहरू निम्त्याउँदछ । स्वास्थ्यजन्य फोहरमैलामा खासगरी क्लिनिक, अस्पतालन, प्रयोगशाला, ब्लड बैंक, दन्त क्लिनिक, मातृ शिशु केन्द्र र जनावरहरूको अस्पतालबाट निस्कने फोहरलाई जनाउँदछ ।
खोप कार्यक्रमबाट निस्कने फोहर, स्वास्थ्य क्याम्प र घरघरमा बिरामीलाई रेखदेख गर्दा निस्किने फोहरलाई पनि स्वास्थ्यजन्य फोहरभित्र पर्दछन् । स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने केन्द्रबाट निस्कने फोहर प्रायः साधारण फोहर जस्तैः कागज, कार्डबोर्ड र फालेको खानेकुरा आदि पर्दछ । तर केही स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने क्रममा निस्किने फोहरहरू जस्तैः रगत, अन्य शारीरिक तरल पदार्थसँग संक्रमित भएको र यस्ता फोहर विभिन्न रोग फैलाउन सक्ने जीवाणु तथा कीटाणुहरूबाट संक्रमित भएको हुन्छ । प्रयोग गरिएका सुई र अन्य धारिलो औजारहरू जसले मानिसलाई हानि पु¥याउनुको साथै निकै गम्भीर रोगहरू फैलाउने गर्दछ ।
केही स्वास्थ्यजन्य फोहरहरू जस्तै प्लाष्टिक, विभिन्न विषाक्त रसायनहरू मिसिएको पाइन्छ । जब रोग सार्ने जीवाणुबाट, विषाक्त रसायनबाट संक्रमित फोहर अन्य साधारण फोहरमा मिसिन्छ । सम्पूर्ण फोहर संक्रमित भएर जान्छ र यसलाई व्यवथापन गर्ने मानिसको लागि खतरापूर्ण हुन सक्दछ । यसैकारणले फोहरलाई स्रोतमा नै छुट्याउनु पर्दछ । स्वास्थ्यजन्य फोहरमैलाको सुरक्षित व्यवस्थापन पनि साधारण ठोस फोहरमैलालाई व्यवस्थापन गरेजस्तै गरिनु पर्दछ (अध्याय १८) । तर जिवाणु वा किरा भएको शरीरको झोल पदार्थ मिसिएको संक्रमित फोहरलाई पहिले निसंक्रमित गरिनुपर्दछ र वातावरण र जनस्वास्थ्यलाई असर नपर्ने गरी व्यवस्थापन गरिनुपर्छ ।
जुनसुकै फोहरलाई राम्रोसँग विसर्जन सतर्कता साथ नगरेको खण्डमा स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउँन सक्दछ । तर स्वास्थ्यजन्य फोहरले खास किसिमको गम्भीर स्वास्थ्य समस्याहरू निम्त्याउँछ । जस्तै,
हेपेटाइटिस बि र सी, धनुष्टंकार, एच.आई.भी. र एड्स र सियो वा अन्य धारिलो वस्तुहरूबाट छालामा हुने खतरनक संक्रमणहरू पर्दछ ।
एलर्जी, छालामा घाऊ, आँखा पोल्ने, स्वास प्रश्वास, दम र अन्य स्वास प्रश्वाससम्बन्धी समस्याहरू, विभिन्न निसंक्रमित गर्ने रसायन, लुगा धुने डिटरजेन्ट पाउडर, औषधि र प्रयोगशालामा उपभोग गरिने रसायनहरूको कारण श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्याहरू हुन सक्दछ ।
औषधिविरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमताको विकास जब कुनै मानिसले लगातार प्रायः एन्टिबायोटिक औषधिको सेवन गर्दछ उसमा यी एन्टिबायोटिक्सले विस्तारै काम गर्न छोड्दछ ।
केही फोहरहरू जलाउँदा वातारणमा उत्सर्जन हुने विषाक्त रसायन जस्तैः डाइअक्सिन जस्ता रसायनहरूले मानिसमा विभिन्न रोगहरू जस्तै क्यान्सर, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या र अन्य रोगहरू निम्त्याउँछ ।
साङ्गु इण्डियाको एउटा सानो गाउँमा जन्मिएको थिइन् । वर्षौंको लगातार खडेरी र बाली नोक्सानीले ऊ सानो भाई र आमासहित राम्रो र खुशी जीवनको खोजीमा शहरतर्फ बसाई सरे । उ आमाको परिवारसँग उकालो पहाडनिरको ल्याण्डफिल (फोहर थुपारेको) भागतिर बस्न थालिन् । त्यहाका अरु बच्चाहरूले साङ्गुलाई फोहर थुप्रोेबाट बेच्न मिल्ने सरसामानहरू संकलन गर्ने कुरा सिकाए । विहान हरेक दिन स्कुल जानुअगाडि उ फोहर फाल्ने ठाउँबाट टिन, काँचको टुक्रा, बोतल, प्लाष्टिकको झोला र अन्य सामग्रीहरू संकलन गर्थिन् ।
यसलाई बेचेर आएको पैसाले साङ्गु स्कुलबाट फर्कदा खानेकुरा र तातो चिया किन्ने गर्थिन् । शहरको जीवन निकै कठिन हुँदै गयो र साङ्गुको आमा दिनहुँ घरबाट बाहिर काम गर्न थालिन् । सधैँजसो साङ्गुले स्कुल जान छोडेर भाइको हेरचाह गर्न थालिन् । सधैँ उ धेरै लामो समयसम्म फोहरको थुप्रोमा भाईलाई पिठ्युँमा बोकेर घण्टौंसम्म फोहरको संकलन गर्न र छुट्ट्याएर ल्याउन थालिन् । कहिलेकाहीँ साङ्गुु फोहर केलाउँदा रगत सहितको ब्यान्डेजहरू, सुईहरू र अन्य स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहर मिसिएको फोहरको सम्पर्क आउन थालिन् । साङ्गुको पातलो चप्पलले उसलाई फोहरमा पाइने धारिलो वस्तुहरूबाट बचाउन सकेन ।
टुटेको काँचको टुक्रा, खिया लागेको फलामबाट कहिलेकाहीँ साङ्गुको खुट्टा र कुहिनोमा काट्थ्यो । एक दिन सिरिञ्जको सुईले साङ्गुुको चप्पल छेडेर उसको खुट्टामा सियोले घोच्यो । त्यसको लगत्तै साह्रै बिरामी भइन्, उसलाई ज्वरो, थकान लाग्ने र घाँटी सुनिनेजस्ता रोगहरूले ग्रसित तुल्यायो । केही सातापछि साङ्गु केही निको भइन् । तर केही महिनापछि फेरि बिरामी भइन् । उनी जतिखेर पनि थकावट महसुस गर्न थालिन्, ज्वरो तथा मुखमा खटिराहरू आउन थाल्यो । भोक लाग्न छाड्यो र निकै दुब्लाउँदै गईन् । उनको परिवार तथा आमा निकै चिन्ता गर्न थाले तर उनीहरूसँग अस्पतालमा डाक्टरकहाँ लाने पैसा थिएन । साङ्गुको आमाले छिमेकीकको नातेदारसँग केही पैसा सापटी लिएर साङ्गुुलाई स्वास्थ्य केन्द्रमा लगिन् । डाक्टरले साङ्गुको कथा सुने सबै परीक्षणहरू गरे र रगतका केही नमुना लिएर परीक्षणको लागि पठाए ।
अर्को दिन उनीहरू फेरि डाक्टरको क्लिनिकमा आउँदा साङ्गुुलाई एच.आई.भी. लागेको कुरा सुनाए । उसलाई औषधि चाहिएको रहेछ तर उसको परिवारसँग पैसा थिएन जसले गर्दा उसलाई चाहिने औषधि तथा आवश्यक हेरचाह पु¥याउन सकियोस् । यसरी साङ्गुको आमाले उसलाई धेरै दुःखको साथ घर फिर्ता ल्याइन् । साङ्गुलाई ओछ्यानमा आराम गर्न राखिन्, तर सबैलाई साङ्गु ठीक हुँदैन भन्ने कुरा पनि थाहा थियो । केही महिनापछि साङ्गुको मृत्यु हुन्छ ।
साङ्गुलाई संक्रमित धारिलो सुइले घोचेर एचआइभी एड्स लागेर मृत्यु भयो । उसको बिरामी र मत्यु वातावरणीय समस्याको कारण स्वास्थ्यजन्य फोहर व्यवस्थापनमा कमजोरीको कारण र गरिबी जस्तो सामाजिक कारणले मृत्यु भयो ।
धेरैजसो सामाजिक समस्याले गरिबीमा बल पु¥याउँदछ । गरिबीलाई समाधान गर्न निकै कठिन पर्दछ । तलका केही प्रश्नहरूले उसको समस्याहरू बुझ्न मद्दत पु¥याउँदछ ।
साङ्गु स्कुलमा किन पढ्न गइनन् ?
साङ्गुलाई फोहर संकलन गरी पैसा किन जम्मा गर्नुपर्ने स्थिति आयो ?
साङ्गुसँग खुट्टालाई बचाउने पूरै ढाक्ने जुत्ता किन भएन ?
उनलाई किन आवश्यक स्वास्थ्य सेवा तथा औषधि उपचार उपलब्ध भएन ?
पातलो चप्पल, औषधि र स्वास्थ्य सेवाको लागि पैसाको कमी र पैसा आर्जन गर्नै पर्ने अति खाँचो यी सबै कारणहरू कुपषोण तथा अन्य स्वास्थ्य समस्या गरिबीको एउटा अभिन्न अंग हो तथा यसले माथिका केही प्रश्नहरूको जवाफ खोज्न मद्दत गर्दछ । यस्ता सामाजिक समस्याहरूको समाधान गर्न निकै लामो समय लाग्ने गर्दछ ।
वातावरणीय समस्या भन्न चाहिँ छोटो समयमा सजिलै समाधान गर्न सकिन्छ । यसका लागि हामीले यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नु पर्दछ ।
पुनः प्रयोग गर्न सकिने वा पुनः प्रशोधन गर्न सकिने फोहरमा किन धेरै हानिकारक स्वास्थ्यजन्य फोहर मिसाइएको होला ?
किन यस्ता धेरै हानिकारक फोहर सुरक्षित विसर्जन नगरी खुल्ला ठाउँमा फालिएको होला ?
स्वास्थ्यजन्य फोहरमैलाको जिम्मेवारीपूर्ण व्यवस्थापन गर्दा यसले सबैको लागि बस्न सक्ने वातावरणमा सुधार ल्याउँदछ र खासगरी गरिबीका कारण फोहर संकलन गरी जीविकोपार्जन गर्ने बाध्य मानिसहरूको जीवनमा सुधार ल्याउन मद्दत गर्दछ ।